TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center – Page2– Because We Believe IT, Should Be Hassle-Free
TRAINING : TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်းများ ………. OUR TRAINING List of some training included in TRA – Myanmar. Hardware Engineering Course (CompTIA A+) Computer အခြေခံ တက်ရောက်ပြီးသူများနှင့် နည်းပညာ Continue Reading →
SOLUTIONS : COMPUTER SOLUTIONS Computer Hardware Setup / Troubleshooting Software & Game Installing/ Reparing Windows Installation & Troubleshooting Virus protection/ removal Computer Maintenance (Regular/Contract & On Call) NETWORK SOLUTIONS Network Infrastructure Continue Reading →
LINUX SERVER နဲ့ WINDOWS SERVER ဘယ် SERVER ကိုသုံးမလဲ ?
Posted on 20/09/2017 by traadmin — 1,280 Comments ↓
ဒီကိစ္စဟာ Microsoft Company က Windows ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့အချိန်မှာ Linux က Open-Source ဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် Linux နဲ့ Windows Server တို့အကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အငြင်းပွားမှု တစ်ခုပါ။ Open Source ရဲ့သဘောက မည်သူမဆို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်။ တစ်ကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ Programming နဲ့ပတ်သက်လို့ နားလည်တက်ကျွမ်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် OS Continue Reading →
Posted in NETWORK	| 1,280 Comments ↓